Finoana, jereo ny tsy hita maso - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-02 > Finoana - jereo ny tsy hita maso
Mbola misy ihany ny herinandro vitsivitsy mankalazantsika ny fahafatesan'i Jesosy sy ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Zavatra roa no nitranga tamintsika rehefa maty Jesosy ary natsangana. Ny voalohany dia niara-maty taminy isika. Ary ny faharoa, dia niara-natsangana taminy isika.
Hoy ny apostoly Paoly: “Raha niara-natsangana tamin’i Kristy ianareo ankehitriny, dia katsaho ny any ambony, izay itoeran’i Kristy, izay mipetraka eo an-tanana ankavanan’Andriamanitra. Katsaho ny any ambony fa tsy ny ety an-tany. Fa efa maty ianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Fa rehefa hiseho Kristy ny fiainanareo, dia hiara-miseho aminy amin’ny voninahitra koa ianareo » (Kolosiana 3,1- iray).
Rehefa maty teo amin'ny hazofijaliana noho ny fahotantsika i Kristy, dia maty teo amin'ny lafiny ara-panahy ny olombelona rehetra, anisan'izany izaho sy ianao. Maty i Kristy ho solontena eto amintsika. Fa tsy toa anay akory, fa maty izy ary nitsangana tamin'ny maty koa fa solontenantsika. Midika izany: rehefa maty izy ka natsangana dia niara-maty taminy ary natsangana niaraka taminy. Midika izany fa eken'ny Ray isika mifototra amin'izay ao amin'i Kristy Zanany Malalany. Jesosy dia maneho antsika eo anatrehan'ny Ray amin'ny zavatra rehetra ataontsika, ka tsy antsika intsony no manao azy, fa Kristy ao amintsika. Ao amin'i Jesosy dia navotsotra tamin'ny herin'ny ota sy ny saziny isika. Ary ao amin'i Jesosy dia manana fiainana vaovao ao aminy isika ary ny Ray amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Ny Baiboly dia miantso ity vaovao na teraka avy any ambony. Teraka avy any ambony isika tamin'ny alàlan'ny herin'ny Fanahy Masina mba hiaina fiainana manatanteraka haben'ny fanahy.
Araka ny andininy izay novakiantsika sy andininy maro hafa dia miara-miaina amin'i Kristy ao amin'ny fanjakana any an-danitra isika. Maty ny zokiolona taloha ary tonga fiainana vaovao. Ankehitriny ianao dia famoronana vaovao ao amin'i Kristy. Ny fahamarinana mampientam-po amin'ny maha-olom-baovao antsika ao amin'i Kristy dia izao no ahafantarana antsika miaraka aminy sy miaraka amintsika. Tsy tokony hahita ny tenantsika misaraka mihitsy isika, toa an'i Kristy. Ny fiainantsika miaraka amin'i Kristy dia miafina ao amin'Andriamanitra. Momba antsika miaraka amin'i Kristy isika amin'ny alalany sy amin'ny alalany. Ao ny fiainantsika. Fiainantsika izany. Iray ao aminy isika. Ao isika no miaina. Tsy mponina eto an-tany ihany isika; mponina any an-danitra koa isika. Tiako ny hamaritra izany ho miaina amin'ny faritra roa - ny faritra tsy maharitra, ara-batana ary mandrakizay. Mora ny milaza ireo zavatra ireo. Sarotra kokoa ny fahitan'izy ireo. Marina anefa izany na dia miady amin'ny olana andavan'andro iainantsika aza isika.
Mampirisika antsika tsy hijery ny hita maso i Paoly fa hifantoka amin’ny tsy hita maso: “Izany no tsy mba ketraka; fa na dia mihasimba aza ny toetray ivelany, dia havaozina isan'andro isan'andro kosa ny anatiny. Satria ny fahoriantsika, izay ara-nofo sy mora, dia miteraka voninahitra mandrakizay sy mavesatra ho antsika, izay tsy hitantsika amin’ny hita, fa amin’ny tsy hita. Satria ny zavatra hita dia ara-nofo; fa ny tsy hita dia mandrakizay »(2. Korintiana 4,16- iray).
Izany no tena fiaingany. Izay no fototry ny finoana. Manova ny eritreritrao manontolo ny fahitana ity toe-javatra vaovao misy anao ao amin'i Kristy ity, anisan'izany ny zavatra mety hitranga aminao amin'izao fotoana izao. Rehefa fantatrao fa mitoetra ao aminao i Jesosy, misy fahasamihafana lehibe amin'ny fomba ahafahanao miatrika ny raharaha amin'izao fiainana izao.